Muraraungu weOrlando Archive - Kodzero dzevanhu & Chiedza Art na ∴ PixelHELPER Foundation
25 Dai 2013
Kubva kuRainbow - yakajeka art yekubatanidza mabhiriji
Kufungidzira chiitiko chekuenzanisa pane muraraungu.
Chiedza chisingaperi chisingagoni kupinza muraravhe musi weMugovera manheru kubva kuDüsseldorf yeimba yeguta pamusoro peguta.
Mushandirapamwe we "Kubva Muraravungu" iyo PixelHELPER inomirira kuwedzera kushivirira uye kurwisa kuvenga.
Muraraungu unomiririra tariro & kukwana. Chero nguva vanhu pavanoona muraraungu, chinhu chimwe ndechechokwadi: rima nemvura hazvina izwi rekupedzisira.
Chiedza chehunyanzvi chirongwa "Kubva kuRainbow" naOliver Bienkowski chirongwa chiri kuenderera mberi umo mabhiriji anozivikanwa, zvivakwa uye dhizaini yemadhorobha ari kushandurwa kuita anonzi mabhiriji emuraraungu. Parizvino, pamusoro pebhiriji rechiteshi muMedienhafen muDusseldorf, iro Karl Branner Bridge muKassel rakagadzirwazve. Iyi purojekiti yakakamura vanhu kumusoro kuDocumenta uye ndokusimudzira kwakasimba kune vashanyi vekunze vehunyanzvi. Gedhi reBrandenburg rakashandurwa kuita muraraungu weMutambo weMwenje. Kassel Bergpark Kaskaden ane mukurumbira, chikamu cheUNESCO World Heritage Site, akapihwawo muraraungu wependi. Naizvozvi, muimbi anotsigira kuwedzera kushivirira uye kurwisa ruvengo.
Kubva kuRainbow - yakajeka art yekubatanidza mabhiriji May 6th, 2020Oliver Bienkowski